Top 4 Music Librarys iyo Music Library Qabanqaabiyayaasha
Top 4 Music Librarys iyo Music Library Abaabulaha
Abaabulayaasha maktabadda ayaa ah kuwa barnaamijyo aan loo kaliya la siiyo dadka isticmaala si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican, laakiin waxa kale oo ay la hubiyo in nidaamka ugu fiican ee maamulka online content waxaa fulin, user. Waxaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo qaababka ugu wanaagsan ah oo natiijooyinku ay arrintan la xiriira iyadoo ay sabab u technology online oo uu soo dhisay si ay u hubiyaan in user marnaba uu leeyahay si ay u isticmaalaan terminologies ku saabsan nidaamka laftiisa. Isticmaalka hababka maaraynta online content music sii kordhaya iyadoo maalin walba marayay sida dadka isticmaala iyo aad u badan ayaa u isticmaalaya goobaha si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay content ah oo ay soo iibsaday sidii loo maamula magacyada weyn ee warshadaha ee hab xiddig.
Top music maktabadda software
Hoos waxaa ku qoran barnaamijyada software maktabadda music sareeya laga doodi doono qodobkan si ay u hubiyaan in user wuxuu noqonayaa ogyahay arrin ku saabsan:
3. Lugood Music Library
5. TunesGo --the qabanqaabiyaha maktabadda music ugu wanaagsan
Maqtabadahani iyo fikrado la xiriira waxaa ka wada xaajoon doona iyadoo la kaashanayo Screenshot si user marnaba sii qiyaasi karin ku saabsan functionalities iyo helo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira.
Ay taageerayaan ciidammada xoogga Google tani waa mid ka mid ah maktabadaha music fiican ee jeer oo dhan iyo habka la xiriira si ay u isticmaalaan functionalities ayaa sidoo kale ka wada hadlay si faahfaahsan.
i. User wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in URL http://music.google.com loo kala helo si aan adeegga la soo biiray:
ii. Xisaabta caadiga ah waxaa ka dibna in la soo xulay:
iii. Xisaabta caadiga ah waxaa markaas la dhisayona:
iv. Salada Google ka dibna waa in ay noqdaan Mudanayaasha sidoo kadib markii ay galeen macluumaadka la doonayo:
. v Macluumaadka waa in dib loo eegaa si loo hubiyo in iibka waa guul,
vi. Tababaraha music waxaa markaas in la soo bixi:
vii. Tababaraha music ayaa markaas la soo bixi doonaan,
viii. Press soo socda:
IX. Xogsanpost xisaabta Gmail loo isticmaalo bixinta:
x. Tababaraha music ayaa haatan diyaar u yahay in la isticmaalo si loo hubiyo in fursadaha waxaa loo isticmaalaa:
xi. Upload gabayo lahaa,
XII. Si loo isticmaalo mustaqbalka dooro ikhtiyaarka ku habboon:
XIII. Horumarka waxaa laga daawan karaa by xaq u riixaya icon music Google ee saxaarad nidaamka iyo tan ayaa sidoo kale ka baxayo geedi socodka. User ayaa xaqiijin kara in android ama qalab kale oo wax ku xiran computer iyo heesaha waxaa si fudud synced waa in ay:
Waa in la ogaadaa in isticmaalka YouTube music ama maktabadda Audio waa mid aad u fudud oo kooban. User ayaa kaliya u baahan si ay u hubiyaan in fursadaha u yihiin sahamiyey hab ugu fiican ee shaqo lagu sameeyey hesho:
i. URL in ay soo booqdaan arrintan la xiriira waa https://www.youtube.com/audiolibrary/music si page guriga waxaa heli:
ii. Menu ayaa hogaanka waa in la isticmaalo si loo hubiyo in tareenka mashaariicda waxaa baadhay oo qaybo kala duwan:
iii. The baararka on xaq u tuso sida loo jecel yahay track ah waa:
iv. War fallaadhihii waa la riixi karo si loo hubiyo in wadada si fudud ayaa soo bixi:
. v Marka track ayaa lagala soo bixi karaa ama waa la synced wareejiyo wax qalab android ama macruufka si uu u dhameystiro nidaamka:
3. maktabadda music Lugood
Ay taageerayaan ciidammada xoogga Apple Inc. maktabadda music Lugood waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican si loo hubiyo in user helo heshiis ugu fiican iyo natiijada arrintan la xiriira. Nidaamkan maamulka content sidoo kale la hubiyo in qofka uu helo qaababka aan la heli karaa iyada oo barnaamij kasta oo kale. Ka dib waa hab si loo hubiyo in Lugood waxaa loo isticmaalaa habka ugu fiican:
i. Lugood waa in la soo bixi URL https://www.apple.com/itunes/download/ halkaas oo nooca ugu dambeeya waxaa mar walba la cusbooneysiiyaa. User wuxuu u baahan yahay in la raaco Dardar si loo hubiyo in software waxaa si guul leh ku rakiban iyo ka dib marka la sameeyo ka dib markii furitaanka interface ugu weyn noqon lahaa sida hoos ku qoran:
ii. The badhamada ugu sareysa ay tahay in la isticmaalo adakaanayso dhexeeya files kala duwan:
vi. User waxay u baahan tahay in lagu xiro qalab macruufka ah ee la kombiyuutarka si aad u hagaagsan oo barnaamijka sida ku cad:
vii. Oggolaansho System waxaa markaas loo baahan yahay iyo sidoo:
viii. Laga soo bilaabo menu ugu weyn user ay u baahan tahay in guji ikhtiyaarka ah oo kooban:
IX. Button ayaa u hagaagsan waxaa markaas in la sii adkeeyey inay ku dhameystaan ​​hanaanka gebi ahaanba:
Si loo hubiyo in nidaamka Spotify maamulka content music waxaa si waxtar leh loo isticmaalo, waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in nidaamka soo socda waxaa la socda in la hubiyo in natiijada ugu fiican iyo natiijada waxaa loogu talagalay user:
i. User wuxuu u baahan yahay in ay soo booqdaan https://www.spotify.com/int/download/ si loo hubiyo in nidaamka la soo bixi, waayo, PC ama laptop ah:
ii. User ayaa markaas ayaa u bilowdo barnaamijka si loo hubiyo in shaashadda soo socda u muuqataa meesha user u baahan yahay si loo hubiyo in faahfaahinta login ah waxaa la siiyaa:
iii. Qalabka waa in lagugu xiro shabakad isku internet ah oo ay PC ama laptop ku xiran:
iv. The app Spotify waa in la soo bixi, waayo, qalabka iyo sidoo:
. v Markaad gasho galay codsiga user ay u baahan tahay inay raadiso qalabka codsiga desktop spotifiy:
vi. User ayaa u hagaagsan labada music oo dhan ama kaliya ka dhigi kartaa hubsan kartaa in playlists jecel yihiin synced si aad u dhamayso ee buuxa:
TunesGo --the qabanqaabiyaha maktabadda music ugu wanaagsan
Music Apple u iPod taabto, nano iPod, shaandheyn, iyo iPhone, iPad
Top 10 Composers casriga ah iyo waxay Music Qadiimiga ah oo caan ku
Sida loo Download Amazon Music Si fudud iyo si xor ah
> Resource > Music > Top 4 Music Librarys iyo Music Library Qabanqaabiyayaasha